China UHP700 Shida Carbon Graphite Electrode Manufacturer and Supplier |DEYI
Petroleum Coke nke eserese (recarburizer)
Graphite Electrode ntụ ntụ
Graphite Electrode bụ ihe kacha mma na-eduzi maka ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ.Coke agịga dị elu na HP&UHP graphite electrode hụ na arụmọrụ electrode zuru oke.Ugbu a ọ bụ naanị ngwaahịa dịnụ nke nwere oke ọkụ eletrik na ikike nke ịkwado oke okpomọkụ dị oke elu na-emepụta na gburugburu ebe a na-achọsi ike.
Kedu mgbe m nwere ike nweta ọnụahịa ahụ?
Anyị ga-aza gị n'ime 24 awa mgbe na-gị zuru ezu chọrọ,dị ka size, quantity wdg Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ngwa ngwa iji, ị nwere ike na-akpọ anyị ozugbo.
Ị na-anabata iwu OEM ma ọ bụ ODM?
Ee, anyị na-eme.Enwere ike ịhazi ma bipụta akara mbupu dịka ihe ịchọrọ.
Ọtụtụ mgbe oge nnyefe bụ ụbọchị 10 ruo 15 mgbe ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ bịanye aka na nkwekọrịta ahụ.Ma ọ bụ oge nnyefe nwere ike kpakọrịta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe kwa ọnwa ma ọ bụ oge pụrụ iche.
Ị na-anwale ngwongwo gị tupu ebuga?
Ee, anyị na-anwale ogbe ọ bụla tupu nnyefe.
A na-esi na Japan ebubata ihe nlegharị anya (lee foto) nwere nledo dị elu n'etiti ọnụ ara na electrode.Ọzọkwa nkọwa ndị dị ka ndị na-eguzogide, nnukwu njupụta wdg ga-elele na-anwale site ọkachamara ngwá tupu nnyefe si osisi.
Kedu otu ị ga-esi dobe mmekọrịta azụmahịa ogologo oge na ntụkwasị obi?
1. A na-enye ezigbo mma na ọnụahịa asọmpi iji jide n'aka na uru ọ bụla maka ogologo oge;
2. Zaghachi ngwa ngwa na ọrụ ezi obi.Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-ahazi ndị ọkachamara ọkachamara ka ha nyochaa ojiji ngwaahịa ahụ.
Nke gara aga: UHP650 Shida Carbon Graphite Electrode
Osote: Shida Isostatic Graphite